Tag: personalized email marketing | Martech Zone
Kpido: ịre ahịa email nkeonwe
Cheta mgbe Nike webatara mgbasa ozi Just Do It? Nike nwere ike nweta oke omuma ihe omuma na otutu okwu a di mfe. Billboards, TV, radio, print… 'Just Do It' na Nike swoosh juru ebe niile. Ọ bụ mmadụ ole Nike nwere ike ihu ma nụ ozi ahụ zitere ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi ahụ. Ọ bụ ọtụtụ ụdị dị iche iche jiri ụdị usoro a n'oge ahịa ahịa ma ọ bụ 'oge mkpọsa' yana nke ukwu